I-VILLA ENGU-2 ENENDAWO YOKUBHUKUDA ENGADINI ESENKABAZWE - I-Airbnb
I-VILLA ENGU-2 ENENDAWO YOKUBHUKUDA ENGADINI ESENKABAZWE
Ilungele umndeni, amagumbi okuxhumana angu-2: elinye linombhede omkhulu, elinye linemibhede engu-2 120cm engakwazi ukulala umuntu oyedwa omdala noma izingane ezingu-2 ngazinye. Sicela wazi ukuthi lokhu kusayizi omncane kakhulu wombhede olala abantu ababili futhi ngenxa yalokho akufanelekile kwabanye. E-Villa konke kuhlinzekelwe ukunethezeka kwakho, ingadi, indawo yokubhukuda enombhede wayo wase-Bali nezihlalo zedekhi, kanye nendawo yokubhukuda. Uzojabulela isidlo sasekuseni samahhala esilungiselelwe umsizi wendlu ngokushesha nje lapho uvuka, futhi ukhonze indawo yokubhukuda.
Indlu ethulile eseduze ne-Kep Natural Park, nemizuzu engaphansi kwengu-10 ngesithuthuthu esivela emakethe yenkalankala edumile nebhishi lase-Kep. Amakamelo anomshini wokuqandisa nokushisisa umoya nomlandeli onikeza abantu abahlalayo ukukhetha. Ukuze uthole inhlanzeko nokuhlonipha indawo ezungezile, indawo yokubhukuda isekelwe usawoti, kanye ne-heater yamanzi elanga. Kodwa-ke, i-heater yamanzi kagesi ithatha izintambo uma isimo sezulu singavumeli ukukhiqiza kwamanzi ashisayo elanga. Kukhona futhi i-TV ephephile, esebenza ngesidlali se-DVD, nendawo yedeski kwelinye lamakamelo.
Ithulile kodwa iseduze ne-Natural Park, imakethe ye-Crab ne-Kep beach.
Phakathi nokuhlala, abanakekeli abashadile baqinisekisa ukunakekelwa kwendlu nendawo yokubhukuda. Ukuhlanza, imibhede namabhulakufesi alungiselelwe yiwo, kwezinye izidlo azinikezi izitsha. Bahlezi bemamatheka futhi basiza. Siphinde futhi sihlale sitholakala kubabungazi bethu phakathi nokuhlala.
Izidlo zingathunyelwa ku-villa.
Phakathi nokuhlala, abanakekeli abashadile baqinisekisa ukunakekelwa kwendlu nendawo yokubhukuda. Ukuhlanza, imibhede namabhulakufesi alungiselelwe yiwo, kwezinye izidlo azinikezi…